1. 'Bitcoin', ny vola nomerika amin'ny tontolo vaovao Karazana fampiasam-bola inona no hahazo tombony be indrindra! Raha am-polony taona maro lasa izay Misy milaza aminao fa hisy ny vola tsy miankina amin'ny masoivohon'ny governemanta. Fa ho malaza amin'ny fampiasana rehetra Izay ambany ny sarany fandoavam-bola noho ny an'ny fandoavam-bola Hihomehy ianao fa tsy hino. Fa voaporofo androany fa afaka mividy zavatra rehetra ianao. Mahazo valisoa ihany koa amin'ny endrika vola fantatra amin'ny hoe 'Bitcoin'. Bitcoin Inona ny Bitcoin? Bitcoin dia vola nomerika. Solosaina no nanamboarana azy. Izay ny vola tsy azo zahana Tsy misy endrika ho hitantsika toy ny vola taratasy na vola madinika. Rafitra tsy afovoany izany. Tsy misy tompony. Saingy azo ampiasaina fa tsy vola hividianana amin'ny Internet miaraka amin'ny rafitra fandoavam-bola ataon'ny peer-to-peer. Ary niantso ity vola ity "Cryptocurrency"
2. Raha te hanana vola dia tsy maintsy manana kitapom-bola, izany no vola Raha te hanana vola ianao dia mila mitady kitapom-bola tsara, izay hanana fiasa mitovy amin'ny kaonty amin'ny banky. Mitahiry bitcoin alohan'ny andaniantsika azy. Misy sehatra maro samihafa amin'ny poketra - Coinbase wallet dia kitapom-batsy mora ampiasaina amin'ny efijery finday avo lenta. Izy io dia hanohana ny iOS sy ny Androind amin'ny famehezana ny kaonty banky. Fanampin'izany, ny serivisy fifanakalozana Bitcoin dia mivoaka amin'ny vola tena izy ary manome fiantohana amin'ny vola - Mycelium no fampiharana kitapom-bola malaza indrindra amin'ny finday avo lenta. Afaka manohana teknolojia vaovao toa ny Trezor, Tor ary ny fitaovana fitehirizana Bitcoin koa izy io - Electrum Ity poketra ity dia programa iray ampiasaina amin'ny solosaina. Tonga miaraka amin'ny rafitra encryption fiarovana tsara. Mitazona bitcoins betsaka
3. Ahoana ny fomba hahazoana Bitcoin
4. Malalaka ny tariby ho an'ny vao manomboka Tsy dia harena firy, afaka mahazo bitcoin maimaim-poana amin'ny tranokala fanomezana azo atokisana. Izay tsy maintsy zahana tsara Satria hifamamitaka ny ankamaroan'izy ireo Ny tranonkala zaraina marina dia toy ny https://freebitco.in Izay afaka miditra sy mampihatra ary mahazo ny adiresy bitcoin avy amin'ny tranonkala rehetra ao amin'ny Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro na Huobi.co.th hameno sy hitazona ny bitcoin tsy tapaka isan'ora, mahatratra ny kely indrindra. rahoviana Afaka mamindra amin'ny kitapom-bolanay
5. Fifanakalozana tsipika, izay hividianana bitcoin amin'ny baht, ataontsika any Thailandy izany, ny tranokalan'izy ireo, Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro na Huobi.co.th dia ahafahantsika mangataka fanamarinana momba ny mombamomba, hamindra baht ho Kaonty ary mividiana bitcoin amin'ny mpivarotra mba anay. Miankina amin'ny hoe aleonao mitazona vola mandritra ny taona maro, na afaka mivarotra Bitcoin sy mivarotra amin'ny baht koa ianao, nefa misy atahorana ihany koa. Satria misokatra foana ny tsena crypto.
6. Ny bitika tokana sy mahafinaritra an'ny Bitcoin dia azo trandrahana toy ny volamena amin'ny endrika nomerika. Satria natao hananana 21 tapitrisa ny fitambarany, tsy misy mihoatra izany. Ka mila mampiasa teknika fitrandrahana harena ankibon'ny tany isika. Dia ny mihady amin'ny fitaovana fitaovana Izay azo vidiana ity excavator ity amin'ny Internet Atsangano fotsiny, apetaho, aloavy ny volanao ary avelao. Hanohy handavaka vola madinika nomerika ho antsika izy io.
7. Samy hafa ny fomba fampiasam-bola amin'ny Bitcoin. Mety tsy afaka mitsara hoe iza no tsara indrindra Fa zava-dehibe ny mianatra tsy tapaka ny antsipirihany sy ny fironan'ny mpivady vola. Mba hanampiana amin'ny fifanarahana ny tombom-barotra marina amin'ny fotoana voafetra. Ary mahazoa ny vokatra tsara indrindra ho anao